News Archives - Pale Nadi Services Company Limited
by Khant Nay Win
Myanmar 2017 Holidays
Source: Ministry of Foreign Affairs Republic of the Union of Myanmar (Yangon) and Myanmar bank holidays and public holidays. The Ministry of Foreign Affairs of the government of Myanmar has announced its annual list of the dates of the official non-working public holidays in Myanmar for the upcoming calendar year 2017.
in Business, Custom Clearance, Logistics, News
Special Order အကြောင်း။ SO (အထူးအမိန်) သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာဖြင့် ရှင်းလင်း ခွင့်ဆိုင်ရာ ကတိဝန်ခံချုပ် ရက်လွန်ဒဏ်ကြေး (Direct Penalty) များသတ်မှတ်မူ့နှင့် Deposit ငွေကောက်ခံထားမူ့ ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးပြဌာန်းချက် ၁။ သွင်းကုန်ပစ္စည်းများကို ရှင်းလင်းထုတ်ယူခွင့်ပြုရာတွင် ကုန်တင်သွင်းသူ၊ ဌာနအဖွဲ့ အစည်းများ အနေနှင့် အောက်ပါပစ္စည်းများအား အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ အထူးအမိန် လုပ်ငန်းစုတွင်SO (Special Order) ဖြင့် အထူးအမိန့် သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ တင်သွင်းလျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ၂။ သွင်းကုန်ပစ္စည်းများကို ရှင်းလင်းထုတ်ယူခွင့်ပြုရာတွင် ကုန်တင်သွင်းသူ၊ ဌာနအဖွဲ့ အစည်းများအနေနှင့် အောက်ပါပစ္စည်းများအား အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ အထူးအမိန် လုပ်ငန်းစုတွင် SO (Special Order) ဖြင့် ...
Draw Back Procedure
in Business, Custom Clearance, News
ပြန်လျော့ အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်ပင်လယ်ရေကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေပုဒ်မ၂၀၄(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါလုပ်ထုံးလုပ် နည်းများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်၊ အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့် အဓိပွါယ်ဖော်ပြချက် ၁ ။ (က) ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြန်လျော့ အကောက်ခွန် စနစ်(Drawback) ဆိုင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ (ခ) ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် စတင်ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက် စေရမည်။ ၂။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည်။ထို့ ပြင် အောက်ပါစကားရပ် များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေရမည်- (က) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆိုသည်မှာ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ...
Ph : +951 200948, 292927, 292928
Email : services@pearlnadi.com
Website : www.palenadi.com
Facebook : www.facebook.com/PalenadiServices
Copyright © 2017 Pale Nadi Services Co.,Ltd. | All Rights Reserved. Powered by : Myanmar Host